सेयर लगानीकर्ताको अपराध - Karobar National Economic Daily
सेयर लगानीकर्ताको अपराध
query_builderSeptember 25, 2017 7:19 AM supervisor_accountडा. प्रदीप बराल visibility720
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले लाभांश घोषणा गर्दा अक्षम्य गल्ती गरेको छ । पुँजीबजारमा भरपर्दो मानिएको यो बैंकबाट सूचना प्रवाहमा यस्तो किसिमको लापर्वाही हुन सक्छ भन्ने धेरैलाई विश्वास गर्न गाह्रो भएको छ । यो मुद्दालाई व्यवस्थापन गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डको शैली झनै आश्चर्यचकित बनाउने खालको छ । लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि स्थापित यो संस्थाले लगानीकर्तामाथि ऐतिहासिक अन्याय गरेको छ ।
स्पष्ट छ, गल्ती इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाटै भएको हो । भदौ २१ गते लाभांश वितरणसम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णय जानकारी पहिलो पत्रमार्फत ‘२५ प्रतिशत बोनस सेयर र १५ प्रतिशत नगद लाभांश’ उल्लेख गरेर सार्वजनिक गरिएको छ । एक घण्टापछि दोस्रो पत्रमा सोही सूचनालाई ‘१५ प्रतिशत बोनस सेयर र २५ प्रतिशत नगद लाभांश’ भनेर प्रस्तुत गरिएको छ । सेयर बजारमा सर्वोपरि महŒवको यस्तो सूचना प्रवाहमा इन्भेस्टमेन्ट बैंकले गरेको यो गम्भीर लापर्वाही हो ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमार्फत लगानीकर्ताले इन्भेस्टमेन्ट बैंकले दुई किसिमको सूचना दिएको जानकारी पाए । मिडियामा आएअनुसार यस विषयमा धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धान जारी छ । तर, अनुसन्धानका लागि बोर्डले जुन शैली अपनाएको छ त्यसले सकारात्मक संकेत दिइरहेको छैन ।
पहिला उसले भएको कारोबारको राफसाफ स्थगित गर्न आदेश दियो भने पछि ती कारोबारलाई रद्द गर्न भन्यो । वर्तमान प्रविधियुक्त कारोबार पद्धतिमा धितोपत्र बोर्डका ती दुवै आदेश अनावश्यक थिए ।
वास्तविक दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र निर्दोष लगानीकर्ताले सजाय पाउने परिस्थिति यसबाट निर्माण भएको छ । यसैले धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धान देखावटी हो, यसले लगानीकर्ता र पुँजी बजारको पक्षमा कुनै नतिजा हासिल गर्दैन भन्ने सहज अनुमानयोग्य विषय भएको छ । नेप्से तथा सीडीएसको प्रणालीमा कारोबारको विवरण अभिलेख भएकै हुन्छ होला । यी तथ्य तथा तथ्यांकहरूबाट दोषी पहिल्याउन नसकिने हो र ?
हुन त धितोपत्र बोर्डले ‘आइस्को प्रिन्सिपल’को दुहाई दिने गर्छ । आइस्को प्रिन्सिपलको मुख्य उद्देश्य बजारको स्वच्छता, लगानीकर्ताको हक सुरक्षा र प्रणालीगत जोखिमको न्यूनीकरण हो । ‘हामी आइस्कोको सदस्य भयौं, अब नेपालको पुँजीबजार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार चलाउँछौं,’ बोर्ड भन्छ । तर, उसका कदमहरू विपरीत दिशामा हिंडिरहेका छन् । धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा लगानीकर्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु भनेको लगानीकर्ताको खरिदबिक्री आदेश टुंगोमा पुग्छन् भन्ने हो ।
मैले किनेको सेयर मैले पाउने पक्का छ । मैले बेचेको सेयर बिक्री हुन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु भन्ने अवस्था हो । सस्तोमा सेयर किन्ने अनि महँगोमा बेचेर बजारको लाभ उठाउने अवसर अरू लगानीकर्ता सरह मलाई पनि उपलब्ध छ भन्ने हो । तर, धितोपत्र बोर्डको कदमबाट भदौ २१ मा इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सेयर किनबेच गर्ने लगानीकर्ताले आफ्नो अधिकार गुमाएका छन् । बिनाअपराध लगानीकर्ता दण्डित भएका छन् ।
सेयर बेच्ने लगानीकर्ता
भदौ २१ गते लगानीकर्ताले ८ सय ५ रुपैयाँसम्ममा इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सेयर बेचेका छन् । धितोपत्र बोर्डले कारोबार रद्द गर्न आदेश दिएबाट उक्त दिन अधिकतम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न पाएको लगानीकर्ताको अधिकार हनन भएको छ ।
के धितोपत्र बोर्डले उक्त दिनमा ८ सय ५ रुपैयाँमा इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सेयर किन्ने लगानीकर्तालाई अपराधी करार गरेको हो ? होइन भने उक्त दिन ८ सय ५ रुपैयाँमा इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सेयर बिक्री गर्ने लगानीकर्तालाई कसले क्षतिपूर्ति दिन्छ ?
सेयर किन्ने लगानीकर्ता
धितोपत्र बोर्डको कदमबाट सेयर किन्ने लगानीकर्ता पनि अन्यायमा परेका छन् । त्यो दिन किन्नेले इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सेयर न्यूनतम ७ सय ४२ रुपैयाँसम्म किन्न पाएका छन् । इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सेयर न्यूनतम ७ सय ४२ रुपैयाँमा पाएँ भनेर दंग परेको लगानीकर्तालाई धितोपत्र बोर्डले ‘यो तेरो सेयर होइन’ भनेर हिस्स पारिदिएको छ ।
सामूहिक विवेकको अपमान
सेयरको बजार मूल्य भनेको केही होइन, लगानीकर्ताले मानेको मूल्य हो । कुनै सूचना आएपछि लगानीकर्ताले त्यसप्रति भिन्नाभिन्नै प्रतिक्रिया जनाउँछन् । धेरै लगानीकर्तालाई सूचना सकारात्मक लाग्यो भने उक्त सूचना जोडिएको सेयरको माग बढ्छ र मूल्य बढ्छ ।
यसविपरीतको अवस्थामा सेयरको मूल्य घट्छ । दोस्रो बजारमा यसबाहेक अर्को ढंगले सेयरको मूल्य स्थापित हुँदैन । लगानीकर्ताको ज्ञान, लगानी अनुभव, उसको आर्थिक पृष्ठभूमि, विश्लेषण क्षमता, उमेर, भावनात्मक परिपक्वतालगायतले कुनै सूचनाप्रति कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने निर्धारण गर्छ ।
यो प्रक्रियामा कुनै लगानीकर्ताले आफ्नो विश्लेषणका आधारमा अख्तियार गरेको रणनीति सही वा गलत हो भन्ने कुरा लगानी निर्णयबाट हासिल हुने नतिजाअगावै पहिल्याउन सकिने वैज्ञानिक औजार अहिलेसम्म आविष्कार भएको छैन । धितोपत्रहरूको बजार मूल्य कुन सही हो कुन होइन भन्ने विषयमा धेरै अनुसन्धान भएका छन् । कतिपय अनुसन्धानले नोबेल पुरस्कार नै पाएका छन् तापनि ती सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त होइनन् । सूचनालाई खेल्न दिनुपर्छ ।
धितोपत्रहरूको बजार मूल्यमा सूचनाहरू प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । सूचनाहरूको विश्लेषण गर्ने, सही वा गलत ठह¥याउने विषय लगानीकर्ताको अधीनमा हुनुपर्छ तबमात्र बजारले परिपक्वता हासिल गर्छ । स्टक एक्सचेन्ज वा धितोपत्र बोर्डको निर्देशनले बजार परिपक्व हुँदैन । स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्ड बाहिर पनि बजारलाई बुझ्ने मान्छे छन् । उनीहरूको विवेकको सम्मान हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय सूचनाले होइन, वित्त बजार लगानीकर्ताको भावनाले परिचालित हुन्छ भन्ने मान्यताले लोकप्रियता हासिल गरेको छ । बिहेभियरल फाइनान्स भनिने ज्ञानको यो तुलनात्मक नयाँ शास्त्रले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा जोड दिन्छ । यसले पुराना सूचनामा आधारित धितोपत्रहरूको मूल्यांकन सिद्धान्तहरूलाई अपुरो भन्छ ।
भरपुर सूचनायुक्त लगानीकर्ताले पनि सधैं खोटरहित लगानी निर्णय गर्न सक्दैन । मानवीय निर्णयमा भावना जोडिएको हुन्छ । भावना वस्तुगत हुन सक्दैन । लगानीकर्ताका निर्णय लोभ र त्रासले प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले लगानी निर्णयमा ‘पूर्णता’ होइन, ‘पर्याप्तता’ खोज्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष बिहेभियरल फाइनान्सका विद्वान्हरूको छ ।
कुनै लगानीकर्ता विशेषका लागि पर्याप्त हुने विश्लेषण अर्कोका लागि नहुन सक्छ । यसैका आधारमा पहिलो लगानीकर्ताको ‘पर्याप्त’ लगानी निर्णयलाई गलत भन्न सकिँदैन । तर, धितोपत्र बोर्ड र अन्य नियामक निकायले नेपालमा वित्तीय सम्पत्तिहरूको मूल्य तोकिदिने गरेका छन् ।
हाम्रा नियामकहरूको यो शैली स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण पद्धतिको प्रतिकूल छ । उनीहरूले वित्त बजारका उपभोक्ताको विवेकलाई सम्मान गर्नुको साटो अपमान गरिरहेका छन् । वित्त बजारका नियामकको तानाशाही प्रवृत्तिको निन्दा गर्नुपर्छ ।
नेपालको पुँजीबजारले पक्रन खोजेको गतिलाई धितोपत्र बोर्डले पछ्याउन सकेको छैन । पुँजीबजारको आवश्यकताभन्दा धितोपत्र बोर्डलाई कानुन प्रदत्त अधिकारले डो¥याउन खोजिएको छ । कतिपय सन्दर्भमा त बोर्डले प्राप्त अधिकारको अविवेकी प्रयोग गरिरहेको छ ।
इन्भेस्टमेन्ट बैंकको प्रसंग पनि बोर्डले गरेका अविवेकी निर्णय शृंखलामा अर्को कडी बन्न पुगेको छ । धितोपत्र बोर्डमा पुँजीबजारका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्थापकीय कौशलको नितान्त अभाव छ । बोर्डसँग ठोस, दीर्घकालीन र दिगो रणनीति छैन । प्रचारमुखी र लोकप्रिय कार्यक्रमले पुँजीबजारको विकास गर्दैन ।
नियामकले सूचना बंग्याउन खोज्नेलाई चामलमा मिसिएको बियाँजस्तै निकाल्न सक्नुपर्छ । सबैलाई थाहा थियो, इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई धितोपत्र बोर्डले कारबाही गर्न सक्दैन भनेर । भदौ २१ मा कसले गल्ती गरेको हो ?
त्यस्तो गल्ती गर्नेलाई के कति सजाय हुन्छ भन्ने स्पष्ट छ । तर, बोर्ड अहिले दोष पन्छाउन सकिने पात्रको खोजीमा छ । प्रत्याक्रमण गर्न नसक्ने पात्र बोर्डले खोजिरहेको छ । त्यस्तो पात्रको खोजी बोर्डले गरिरहेको छ, जसको टाउकोमा दोष थोपर्दा भोलि आफैंलाई अप्ठेरो नहोस् । समस्या समाधान गर्नेभन्दा लगानीकर्ता र मिडियासामु इज्जत बचाउने कसरतमा बोर्ड लागेको छ ।
सूचना भ्रामक नै किन नहोस्, लगानीकर्ताले जोखिम मोलेका थिए । ती साहसी लगानीकर्तालाई धितोपत्र बोर्डले ‘तिमीहरूले जोखिम मोल्न पाउँदैनौं’ भनिदिएको छ । यसले बजार सञ्चालनको मूल मर्ममै प्रहार गरेको छ ।
जागिर खानेहरूलाई साहस, उद्यमको मूल्य थाहा हुने कुरा पनि होइन । भदौ २१ मा सेयर बजारमा गलत भएको छ । तर, गल्ती कसले ग¥यो, सजाय कसलाई दिइयो ? निर्दोषलाई सजाय दिएर धितोपत्र बोर्डले गलत नजिर बसाएको छ । एकाध अपराधी छुट्टा केही बिग्रँदैन, तर निरपराधीले सजाय पाउनु हुँदैन भन्ने न्यायको सिद्धान्त हो । कम्पनीले गरेको अपराधमा बोर्डले लगानीकर्तालाई सजाय दिएको छ ।
बैंक पुँजीबजार स्टक एक्सचेन्ज इन्भेस्टमेन्ट बैंक